Fiaraha-miasa amin'ny Sinocare 2018 amin'ny YUELU SUMMIT 2018-News-Sinocare
Fiaraha-miasa amin'ny Sinocare 2018 amin'ny YUELU SUMMIT 2018
Fotoana: 2019-08-16 Hits: 205
Misy fomba fiteny malaza ao amin'ny indostrian'ny Internet any Shina, izany hoe, "misy Wuzhen any atsinanana ary Yuelu amin'ny lohataona", izay manondro fa i Wuzhen dia manana ny Fihaonamben'ny Internet Manerantany ary misy ny Vovonana Internet Yuelu amin'ny lohataona. Ny tanjona voalohany amin'ny Fihaonana an-tampon'ny Internet Yuelu dia ny manasa ireo mpandraharaha amin'ny Internet Hunan sy ireo mpandraharaha hafa hihaona sy hanakalo ny Tendrombohitra Yuelu amin'ny voalohan'ny volana aprily isan-taona. Hatreto dia efa in-efatra no nahomby ilay fihaonana an-tampony, lasa hetsika indostrian'ny Internet finday sy marika famantarana.
CEREMONY fanokafana an'i YUELU SUMMIT 2018
Ny 3 aprily, ny fihaonamben'ny Internet Yuelu Summit 2018 dia natao araka ny voatondro. Ny lohahevitr'ity fihaonana an-tampony ity dia ny "the Innovation Intelligent Innovation". Izy io dia notarihin'ny faritra Changsha National Hi-Tech Industrial Development Zone ary notohanan'ny Departemantan'ny Propaganda an'ny Komitin'ny Antokom-paritany Hunan, ny Biraon'ny Fampahalalam-baovao Cyber ​​Hunan, ny Komisiona momba ny toekarena sy ny fampahalalam-baovao Hunan, ny faritra vaovao Hunan Xiangjiang, ny Hunan Radio sy ny Television Station ary singa hafa. Nivory tao Changsha ireo goavam-be amin'ny finday mba hanangana sehatra fandraharahana amin'ny Internet ary hampiroborobo ny fampidirana lalina ny internet sy ny indostria. Ny hetsika manokana momba ny fahasalamana eo ambanin'ny lohahevitra "Smart Blueprint, Health Mission" izay natolotry ny Sinocare Inc. dia natomboka tamin'ny andrasana lehibe ihany koa.
Fiaraha-miasa ataon'ny antoko maro hananganana drafitra ho an'ny WIT120
Ny tatitra momba ny Kongresy fahasivy ambin'ny folo an'ny antoko dia nanao fanambarana mazava tamin'ny ampahany amin'ny "Fanatsarana ny haavon'ny fiarovana sy ny fiveloman'ny olona, ​​ny fanamafisana ary ny fanavaozana ny fitantanana ara-tsosialy" izay "Fampiharana paikadin'i Shina mahasalama" no tetikady lehibe eto amin'ny firenentsika. Miorina amin'ny foto-kevitry ny “Fahasalamana feno” sy ny “politikan'ny fahasalamana an'ny antoko amin'ny vanim-potoana vaovao”, ity tatitra ity dia nitondra drafitra ho an'ny fahasalamana amin'ny vanim-potoana vaovao.
NY MPITONDRA DEPUTY momba ny fahasalamana sy ny komisiona momba ny drafitra ho an'ny fianakavian'i HUNAN dia nanome lahateny tamin'ilay fivoriana
Amin'ny maha singa iray manan-danja amin'ny fananganana Shina mahasalama, andianà teknolojia vaovao sy fitaovana vaovao, toy ny angon-drakitra lehibe, informatika, solosaina artifisialy, fikarakarana ara-pahasalamana, sns., Dia novolavolaina sy novokarina hatrany, ary ny tetik'asa fananganana fahasalamana dia tena sarobidy. Long Kaichao, talen'ny lefitra misahana ny Komisiona momba ny fahasalamana sy ny fandrindrana ny fianakaviana ao amin'ny faritanin'i Hunan, dia nanamafy fa mila mandray ny fanahin'ny Kongresy fahasivy ambin'ny folo isika ho fitarihana ny làlan'ity forum ity, haneho ny fivoaran'ny asan'ny governemanta ary hitantana ny drafitra feno fahendrena sy fitsaboana amin'ny vanim-potoana vaovao. Miorina amin'ity fahasalamana feno ity, ny Sinocare Inc. dia mikendry ny hampiseho ny zava-bita farany ara-tsiansa sy ara-teknolojia farany amin'ny siansa ara-pitsaboana. Amin'ny alàlan'ny fifanakalozan-kevitra maro dia manolo-tena izahay hikaroka ny fomba ahafahana mampandeha ny teknolojia WIT120, ary hiara-mieritreritra ny ho avin'ny hendry sy salama ary hanampy ny fahasalamana azo tanterahina amin'ny fahasalamana manerantany.
SALONI-TENY TOERANA BRILLIANT
Ny vahiny, ao anatin'izany ny profesora Zhou Zhiguang, sekreteran'ny komitin'ny antoko ao amin'ny hopitaly Xiangya faharoa ao amin'ny Oniversiten'i South South, Li Shaobo, filohan'ny Sinocare Inc., Zhang Fan, mpanorina ary filohan'ny Ansun Angel, Liu Quan, filohan'ny Zhixiang Health Technology (Beijing ) Co., Ltd. ary mpanorina ny Zhimai Pharmacy Engine, Li Chengzhi, mpanorina sy CEO an'ny Beijing Dnurse Technology Ltd., sns, dia nandray anjara tamin'ny salon ho an'ny fahasalamana feno. Nanomboka fifanakalozan-kevitra mafana izy ireo niaraka tamin'ny lohahevitra "Fampidirana sy fampiharana ny fitantanana aretina sy ny aretina mitaiza" hizaha sy hananganana rafi-pitsaboana vaovao sy ekolojia vaovao amin'ny ho avy.
LI SHAOBO, filohan'ny SINOCARE INC., Dia nampiditra WIT120 tany amin'ny mediana
Anisan'ireo hetsika manokana marobe tamin'ny Vovonana Yuelu ireo singa teknolojia avo lenta nahatonga ny hetsika Comprehensive Health tsy manam-paharoa. Tsy vitan'ny hoe nanatsara ny fitaoman'ny WIT120 Forum of Yuelu Summit tao amin'ny indostria izy io, fa nanamafy ny endrik'ilay mpisava lalana indostrialy koa. Ho fanampin'izany, nampita ny foto-kevitry ny siansa sy ny teknolojia hamoronana fiainana tsaratsara kokoa izy ity, ary hamorona rojo indostrialy marani-tsaina izay mampifandray ireo manampahefana ao amin'ny governemanta, orinasa mpamokatra, fikambanana mpitsabo ary ny vahoaka.
Ny fahatsapana ny iraka sy ny teknolojia dia manatsara ny indostrian'ny fahasalamana
Amin'ny vanim-potoanan'ny fivoarana ara-teknolojia, WIT120 dia nandia dingana marobe tamin'ny fampandrosoana, ary mivoatra koa ny asan'ny governemanta. Saingy ny loharano nipoiran'izy ireo dia mijanona ho fanirianay voalohany ary mitazona hatrany ny iraka ampanaovinay hanampy ny indostrian'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny siansa sy ny haitao ary hitondra ny iraka an'i Shina salama mba handrosoany lavitra. Amin'ny maha orinasa teknolojia avo lenta azy izay manolo-tena amin'ny fampiasana ny haitao bio-sensing hikaroka, hampivelatra, hamokatra ary hivarotra vokatra ho an'ny fahitana haingana ny aretina mitaiza, ny Sinocare Inc.
DU HUI, talen'ny famokarana sy famokarana marika amin'ny SINOCARE INC., Dia nampiditra "klinika minitra" ho an'i Media.
Mba hanampiana ireo fivarotam-panafody hanompo tsara kokoa ny marary sy hitantanana tsara ny aretina mitaiza, dia nametraka modely matotra any Etazonia ny Sinocare Inc. mihevitra ny fomba fijerin'ireo mpanome fitaovana hamorona "Clinic Minute" ao an-toerana hahafahan'ny marary manara-maso akaiky kokoa ny aretiny ary mahazo serivisy mifanaraka amin'izany. Ny atin'ny serivisy ao amin'ny "Sinocare Minute Clinic" mahaliana dia mandrakotra ny rafi-pitadiavana index index maro aretina ary ny fitiliana glucose amin'ny ra, ny kolesterola total (TC), ny kolesterola lipoprotein avo lenta (HDL-C), ny kolesterola lipoprotein ambany (LDL-C ), glycerin trimyristate (TG), BMI ary sanda uric acid uric. Afaka mamantatra haingana ireo mari-pahaizana momba ny aretina mitaiza ao anatin'ny minitra vitsy izy ary manampy ny marary handinika, hanombatombana, haminany ary hampianatra, ary koa hanome ny fitantanana angona sy vahaolana manokana, sns.
PROFESSOR YANG WENYING Nizara ny fahalalana THEMATIC amin'ny aretin'ny METABOLIKA sy ny fahasalaman'ny firenena
Amin'ity fotoam-pahasalamana Comprehensive Health ity dia nanipika ireo mpitarika ny taranja fa mila manambatra ny teôria sy ny fanao hampandrosoana ny indostria isika. Profesora sady mpampianatra aorian'ny postdoctoral Yang Wenying, talen'ny fitsaboana anatiny ny hopitaly fisakaizana China-Japan ary ny talen'ny mpitsabo ny Endocrine and Metabolic Disease Center of China-Japan Friendship Hospital, dia nizara fahalalana manokana momba ny aretina metabolika sy ny fahasalaman'ny firenena. Amin'ny maha-manam-pahaizana endocrine an-trano fanta-daza azy, ny Profesora Yang Wenying dia manana fahalalana lalina momba ny diabeta. Izy dia mandray anjara amin'ny fandalinana ny tranga sy ny antony mahatonga ny diabeta, ny metabolic syndrome ary ny aretina hafa any Shina. Ny Profesora Yang dia mankafy karama manokana avy amin'ny filankevi-panjakana ary nahazo loka maro. Izy koa dia talen'ny voninahitra an'ny Chinese Diabetes Society ary filoha lefitry ny Asian Diabetes Society.
Ireo vahiny sy indostria sy orinasa dia nanolotra ny zava-bita farany sy ny torolàlana momba ny fampandrosoana ho an'ny mpandray anjara. Zeng Renxiong, filohan'ny tale jeneralin'ny Honghua Capital Group Co., Ltd. ary Honghua International Medical Holdings (Group) Co., Ltd., dia nanao lahateny lehibe momba ny “Serivisy amin'ny Internet fanavaozana ny fitsaboana ara-pahasalamana sy ny fanalefahana ny fahantrana ho an'ireo tanàna”. Yuan Hong, manam-pahaizana momba ny vola fanampiana manokana an'ny filankevi-panjakana, lehiben'ny tetik'asa momba ny famoronana zava-mahadomelina nasionaly vaovao ary ny tetik'asa 973, ary ny filoha lefitry ny hopitaly Xiangya fahatelon'ny oniversite afovoany atsimo, dia nizara ny zavatra niainany momba ny fitantanana tosidra amin'ny vanim-potoanan'ny finday. . Profesora Yi Fayin, manam-pahaizana momba ny fitsaboana sinoa malaza, Talen'ny Tranombokin'ny oniversiten'i Hunan momba ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa, ary talen'ny Jiuzhitang National Medical Museum, dia nizara ny zavatra niainany momba ny fitantanana Internet sy TCM.
Ireo fampisehoana sy kabary tsara tarehy dia tsy nampiseho fotsiny ny fikarohana sy ny zava-bitan'ny andrim-pitsaboana, ny indostria ary ny orinasa eo ambany fitarihan'ny governemanta, fa nanolotra ny drafitry ny fampandrosoana sy ny hoavin'ny orinasa koa. Betsaka ny solontenan'ny kaonferansa no niara-nizaha ny lalan'ny fampandrosoana WIT120.
Manaparitaka ny “tombony ara-pahasalamana + tombontsoa ho an'ny daholobe” miaraka amin'ny lOve
Ny mahasoa ny olona dia ny faharanitan'ny indostrian'ny fitsaboana, ary toy izany koa ny WIT120. Ny fitaovana siantifika sy teknolojia toa mangatsiaka dia mitady tombontsoa manerantany ho an'ny vahoaka. Ao amin'ny fizarana "Reader" amin'ny hetsika manokana Comprehensive Health, ny mpiasan'ny Sinocare Inc. dia nanatanteraka ny zava-bitan'ny WIT120 amin'ny fiahiana ara-tsosialy amin'ny endrika famakiana am-pitiavana, izay nanjary zava-nisongadina tamin'izany.
Ny mpamaky dia nahitana ankizy voan'ny diabeta mellitus karazana 1 avy amin'ny Xiangya Kangle Camp sy ny fianakavian'izy ireo, ary koa "anjely fotsy", mpitsabo mpanampy avy amin'ny Departemantan'ny Endocrinology ao amin'ny Hopitaly Xiangya Faharoa ao amin'ny Oniversiten'i South South. Ny Sinocare Inc. dia niara-nikarakara ny lapan'ny Xiangya Kangle nandritra ny taona maro ary natokana hifantoka amin'ireo marary voan'ny diabeta karazana 1. Tonga an-tsehatra ihany koa ireo mpilatsaka an-tsitrapo ao Sinocare. Ankoatry ny fanomezana metatra glucose glucose Sinocare maimaimpoana ho an'ireo ankizy voan'ny diabeta mellitus karazana 1, dia nanantena koa izy ireo fa hanao fanabeazana sy fitsaboana an-tsekoly ho an'ireo ankizy amin'ny alàlan'ny asa soa toy ny Camp Xiangya Kangle mba hiantohana ny ankizy bebe kokoa hitombo salama sy sambatra. Noho ny fampiroboroboana ny WIT120, ireto ankizy mahafinaritra ireto dia mety ho feno fanantenana sy hazavana toy ny zaza salama. Namaky mafy ireo ankizy tsy manan-tsiny, anjely fotsy ary mpilatsaka an-tsitrapo ao Sinocare Manana nofy aho ary tohina mafy ny olona rehetra teny an-toerana.
PROFESSOR ZHOU ZHIGUANG, Dokotera malaza ao amin'ny hopitaly XIANGYA, dia nizara ny eritreriny momba ny fitantanan-draharahan'ny DIABETES MELLITUS TYPE 1
"Miaraka amin'ny fandrosoan'ny fiarahamonina sy ny fanatsarana ny fitsaboana, ny diabeta mellitus karazana 1 dia nahasarika bebe kokoa ny fiaraha-monina sy ny mpitsabo, saingy mbola lavitra ny ampy izany. Ny fahasalaman'ny zaza sy ny sainy ara-tsaina dia mila fitandremana bebe kokoa sy fanampiana amin'ny lafim-piainana rehetra. Eto aho dia manantena fa ny vondrom-piarahamonina sy ny orinasa dia miahiahy momba ny diabeta mellitus karazana 1 ary ny dia vaovao amin'ny fampandrosoana teknolojia ara-pitsaboana sy ny fandrosoana ary ny fifindran'ny fitiavana dia tsy tokony hijanona! ” Rehefa nizara ny fitantanana feno ny diabeta mellitus karazana 1 dia nanao antso avo ny Profesora Zhou Zhiguang.
NY SINOCARE DIABETES FOTOTRA azo ampiakarina dia miantso ny CAMP XIANGYA KANGLE
WIT120 dia mahatonga ny fiainana ho tsara tarehy sy ny fiantrana no hahatonga izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa. Sady antenaina no tanjona koa tokony hampiasa fitiavana hanoritana drafitra mahafinaritra ho an'ny fiainana hahasambatra antsika mandrakariva. Nofaranana tamina lanonana fanomezana mafana ity fivoriana nataon'ny Fahasalamana feno ity. Ny Sinocare Diabetes Charities Foundation dia nanome fanomezana ho an'ny Xiangya Kangle Camp izay manome fikarakarana ireo olona diabeta voan'ny diabeta mellitus karazana 1. Ny solontenan'ny orinasa mpandray anjara, anisan'izany ny Sinocare Inc., dia niara-nanolotra ny firariana tsara indrindra ho azy ireo ary manantena ny serivisy ho an'ny daholobe salama, toa ny Kangle Camp, dia nihatsara kokoa. Nanantena izy ireo fa afaka mahazo fiheverana bebe kokoa amin'ny olona ny "Medical + Charity", ary ny olona amin'ny fari-piainana rehetra, miaraka amin'ireo mpandray anjara hafa, dia hanatevin-daharana ireo hetsika fifanampiana ho an'ny daholobe.
Pejy mialoha: Fihaonambe mpivarotra Sinocare voalohany natao soa aman-tsara tany Delhi
Pejy manaraka: Nanatrika ny Middle Middle Middle East Medlab 2018 tany Dubai i Sinocare